‘झुन्डिन तयार’ मन्त्री अर्याललाई यसरी बँचाईयाे ! « Gajureal
‘झुन्डिन तयार’ मन्त्री अर्याललाई यसरी बँचाईयाे !
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०४:२०
के मन्त्री, के नेता, के कर्मचारी, के व्यापारी, के कलाकर्मी – सबैको एउटै थेगो हुन्छ- ‘आरोप पुष्टि भए झुण्डिन तयार छु !’ किनभने उनिहरुलाई थाहा छ – देशको कानुनले आत्महत्याको छुट दिँदैन । भन्नासाथ गर्नैपर्छ भन्ने छैन
यसैक्रममा मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि सोही डाईलग मार्नु भएको छ । ‘घुस्याहा कर्मचारीलाई संरक्षण’को आरोप लागेपछि भन्नू भयो- ‘पुष्टि भए झुन्डिन तयार छु ।’
मन्त्रीज्युको ‘झुण्डिने’ ईच्छाप्रती हाम्रो विमती हैन र सहमती दिन पनि सकिदैन । झुन्डिएर हैन मन्त्रीज्यु, डोरी खोलेर आरोप खन्डन गर्नुपर्छ । मरेर हैन, बाँचेर आफ्नो बिचार राख्न सकिन्छ ।
मन्त्रीज्यू, तपाईं आफ्ना ठाउँमा गलत नहुनु होला तर कुनै भ्रष्टाचार देखाएर हुँदैनन् । सबै भ्रष्टहरुले देखाएर खाँदैनन् । तपाईँलाई भ्रममा पारेका हुन सक्छन् । भित्रभित्रै तर मारेका हुनसक्छन् । कार्यकर्ता बनेर पसेका हुन सक्छन् । सहयोगी बनेर बसेका हुनसक्छन् ।
त्यसरी झुण्डिने, सेरिने, हाम फाल्ने कुरा गर्नु हुन्न । भ्रष्टहरुलाई चिन्नुपर्छ । बेलाबेला भेट्न समय लिनेछन् । राम्रा राम्रा सुझाव दिनेछन् । आफुलाई दिग्गज आँकेका हुन सक्छन् । हजुरको मनोबल जाँचेका हुन सक्छन् । देख्दा सदाचारी भएपनी भित्रभित्रै भ्रष्टाचारी हुनसक्छन् है ।
संरक्षण गरेको छैन, थाहा छ । तर, यति कन्फिडेन्ट नबन्नुस हजुर ! तपाईँको विश्वासलाई टेकेर मौका हेरेका हुन सक्छन् । तपाईँले भ्रष्टलाई संरक्षण नगर्नु भएको हुन सक्छ । भ्रष्टहरुले तपाईँलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका हुन सक्छन् ।
बरु तिनिहरुलाई कानुनको डोरीले बाँध्ने काम गर्नोस् । कहाँ झुन्डिने कुरा गर्या कमरेड !